Whatagraph: Mepụta Ama Ama site na Nchịkọta Google | Martech Zone
Ka anyị chee ya ihu, Google Analytics bụ ọgba aghara maka nkezi azụmahịa. Maka ndị ọkachamara na-etinye oge dị ukwuu n’elu ikpo okwu, ọ bụ ihe ngosi zuru oke ma sie ike nchịkọta ikpo okwu nke anyi maara nke oma na anyi nwere ike inyo ma wedata iji wee zaa ajuju ajuju obula anyi nwere. Dị ka ụlọ ọrụ, anyị abụghị ndị azụmahịa nkezi mana anyị nwere nsogbu na-ekesa data ahụ oge ụfọdụ.
Ndị ahịa anyị - ọbụlagodi ndị ahịa teknụzụ - na-agbasi mgba ike na ntinye na atụ nchịkọta ruo ebe ha nwere ntụsara ahụ ịme ahịa na mkpebi azụmaahịa dabere na nsonaazụ. Maka nke ahụ, anyị ejirila eziokwu chụọ ndị ahịa anyị ka ha ghara ịbanye na Google Analytics, na-ezipụ akụkọ na-akpaghị aka ma ọ bụ ọbụna na-ewu dashboard ahaziri iche. Kama, anyị na-adabere na sistemụ na-akpaghị aka nke na-ewepụta akụkọ nyocha dị mfe maka ndị ahịa anyị.
Whatagraph na-ewe ya ọzọ, na-ewu data Google Analytics n'ime mara mma infographics nke a na-emegharị anya ma nwee ike ịlele ya site na ihe nchọgharị ma ọ bụ wepụta site na PDF. Debanye aha, tinye akaụntụ Google Analytics gị, họrọ ihe onwunwe gị, ị na-agba ọsọ ma na-agba ọsọ.
Mmepụta dị ngwa, yana akụkụ ọhụụ nke ọ bụla nchịkọta metrik, gụnyere:
Kwa ụbọchị, kwa izu, kwa ọnwa ma ọ bụ afọ ruo ụbọchị na-akọ akụkọ site na iji tụnyere oge afọ gara aga
Ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa, kwa ụbọchị, tinyere data ọhụrụ na-alọta
Oge niile, oge ezumike na oge ibiaghachi
Onu ogugu akwukwo, uzo akwukwo kwa oge, na nzuko site na ihe nchọgharị
Mobile, mbadamba na desktọọpụ
Isi mmalite nke okporo ụzọ na ọchụchọ, na-elekọta mmadụ, kpọmkwem na isi mmalite ndị ọzọ gbajiri
Oge site na obodo na obodo
Versionsdị Pro na Agency na-enye ụfọdụ nghọta ndị ọzọ, gụnyere:
Ibe ndị na-ewu ewu na-arị elu na echiche na-agbadata na echiche
Ngụkọta ebumnuche zuru ezu, uru, na ọnụego mgbanwe
Peeji nke nwere ọnụego ịrị elu kachasị elu, ọnụọgụ ego kachasị elu, na ọnụ ụzọ ọpụpụ
Ọwa nwere ọnụọgụ kachasị elu n'okporo ụzọ, ọdịda kachasị elu na njem, mmụba kachasị elu na ọnụego bounce, yana ọnụego mbido kachasị mma
Akwụkwọ ndị dị elu na oge ha na-ebu
Kacha ewu ewu n'ime ọchụchọ
Ngwaọrụ ndị nwere ike ibute nsogbu n'ihi na ha nwere ọnụego oke elu
nchịkọta infographic ”obosara =” 640 ″ elu = ”2364 ″ />
Ọ bụrụ na ị debanye aha dị ka ụlọ ọrụ, ị nwere ike ọbụna kọwaa akụkọ mmepụta, na-agbakwunye atụmatụ agba gị na njirimara.
Nwere ike banye maka Whatagraph na a free ikpe na mgbe nweta nkwalite mgbe 14 ụbọchị na mbipute nke ị na-ahọrọ.
Banye maka Whatagraph
Naanị nkwalite m ga-ahụ n'anya ịhụ n'elu ikpo okwu dị ka nke a bụ ikike ịkọwapụta nkewa karịa ịbupụ data niile. Nchịkọta Google nwere nnukwu nsogbu na spam onye na-ezo aka, ya mere, ọnụ ọgụgụ ndị nwere ike ịdọrọ ọtụtụ maka ihe ndị nwere obere okporo ụzọ.
Tags: akụkọ nchịkọta kwa afọakpaghị aka na-akọnkezi oge ogeụba ọnụegoihe nchọgharịntụgharị ntụgharịakụkọ nchịkọta akụkọ kwa ụbọchịọnụ ọgụgụ ndị ọbịa kwa ụbọchịụzọ ọpụpụụlọ ọrụ nchịkọta Googleọwa nyocha googlegoogle nchịkọta ihe mgbaru ọsọgoogle nchịkọta infographicgoogle analytics peeji nkeinfographicnyocha nke imeihe omuma ohuru nke ndi mmadu biaranlele ihu akwụkwọngụkọta nchịkọta ogengụkọta ndị ọbịaokporo ụzọakụkọ nchịkọta kwa izu
A bit 'buggy', dịka ọmụmaatụ mgbe ị na-ebudata akụkọ ahụ na PDF enwere ụfọdụ eserese na-efu nke na-eme ka akụkụ nke infographic ghara ịba uru 🙁
Na-akpali mmasị - Enweghị m nsogbu ọ bụla n'ebe ahụ, Barry. M na-eche ma ọ bụrụ na ha na-enwe obere oge.
Barry, daalụ maka nzaghachi! Dị ka Douglas gwara, anyị na-emezi usoro ahụ. Ugbu a ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ị ka na-eche nsogbu ụfọdụ ihu, hapụ anyị akara maka ya!
Aditi mba (@nwacho_mkp)
Ọ bịara dị ka nnukwu enyemaka ebe ọ bụ na ọrụ yiri ya site na anya akwụsịla ịrụ ọrụ mgbe ha weghaara ha